Xukuumadda Soomaaliya oo waqti kama dambeys ah u qabatay hay’adaha ku howlgala Kenya – Bandhiga
Xukuumadda Soomaaliya oo waqti kama dambeys ah u qabatay hay’adaha ku howlgala Kenya
Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Qorsheynta Somaliya, C/Qaadir Aadan Maxamed oo ka hadlay halka ay mareyso qorshaha dalka loogu soo guurinayo Hay’adaha Xafiisyada ku leh Nairobi, kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha Somaliya.
C/Qaadir Aadan Maxamed, ayaa tilmaamay in Hay’adaha la rabo iney soo guuraan ay yihiin kuwa aan dowlaiga eheyn, xuriyadna ay u heystaan iney Muqdihso ka dagaan meesha ay ka doonaan.
Waxaa uu intaas ku daray in Hay’adaha laga doonayo in kama dambeys ay dhamaadka Bisha soo socota ee December u soo guuraan Soomaaliya.
Hay’addii ku soo guuri weysa wixii ka dambeeya 31ka December,waxaa uu sheegay in ay kala laabanayaan Diiwaangelinta iyo Miisaaniyadaha ay ku soo qaaddo Magaca Soomaaliya.
Hay’ada UNICEF, oo kamid ah hay’adaha fariinta ah dalka u soo gaara gaartay, ayaa Xafiiskeeda ka furatay Muqdihso, lamana oga sida hay’adaha kale u qaadan karaan Go’aanka Wasaarada Qorsheynta Somaliya.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa bilowgii sanadkan u sheegay hay’adaha ku shaqeeya Nairobi iney sidoo kale ku howlgali karaan dalka Soomaaliya oo ay tahay iney Muqdisho u soo guuraan.